Moshi Otto Q + Vortex 2: Igwe chaja kachasị ọsọ | Akụkọ akụrụngwa
Moshi Otto Q + Vortex 2: chaja ikuku na-agba ọsọ
Miguel Hernandez | | General, Nyocha
Oge okpomọkụ dị ugbu a ma ọ bụ oge iji malite ịmalite ịga ezumike, yabụ, ihe kachasị mma bụ na anyị ga-ahụ na anyị nwere ngwa anyị niile iji tinye akpa akwa ahụ. Ikuku chaja aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa dị mkpa enyere ha nkasi obi na imewe ha, ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ na tebụl nyocha anyị Moshi's Otto Q, nke a na - akpọ 'chaja ikuku na-agba ọsọ ọsọ n'ụwa, ma anyị na-egosikwa gị ọhụụ ọhụrụ Vortex 2, ekweisi Hi-Fi. N'ụzọ dị ịtụnanya, ha abụghị ekweisi Bluetooth, mana ebe a anyị achọghị ịhapụ onye ọ bụla.
Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, ana m ewere ohere iji chetara gị na n'elu ị nwere vidiyo nke ị ga-enwe ike ịhụ abụọ unboxing na ya ime ihe oyiyi, Yabụ ị nwere ike irite uru ma denye aha na ọwa YouTube anyị ma ọ bụ lelee ihe ndị anyị bipụtara n'oge gara aga, ị ga-ahụ ihe masịrị gị ma si otú a nwee ike inyere obodo Actualidad Gadget aka itolite.
1 Moshi Otto Q - Ndị kachasị ọsọ na ahịa
2 Moshi Vortex 2 - ụda ikwesị ntụkwasị obi dị elu
Moshi Otto Q - Ndị kachasị ọsọ na ahịa
Ihe a na-eme Otto Q bụ ihe kpochapụla, anyị na-ekwu maka otu chaja na-ahụkarị, nke e wuru na plastik maka chassis ya, akwa na akụkụ nke elu na obere okirikiri silicone na-eme ka ekwentị anyị nọrọ nke ọma, ihe na-egosi àgwà ozugbo. N'ihu anyị nwere ọnọdụ nkwụ ụgwọ, yana na azụ anyị nwere ọdụ ụgbọ USB-C Site na nke anyị nwere ike ijikọ chaja na ike, nke anyị ji ohere ikwu okwu, etinyeghị ya na ngwugwu. Ọ dị mkpa ikwupụta, ebe ọ bụ na iji "ọsọ" ya mee ihe, anyị ga-agbakwunye ihe nkwụnye ọkụ nke na-akwado ike nkwụ ụgwọ nke Otto Q nwere ike ịnye.
Zụta Moshi Otto Q na ọnụahịa kachasị mma na njikọ a
Magazin Mac & M na ule ya gosipụtara na ọ bụ chaja kachasị ọsọ n'ụwa, ọ bụ chaja nwere ụkpụrụ Qi na ike nke buru ruo 10W. Ezi oru ya na-egbochi ikpo oke ọkụ ma na-eme ka o buru ibu dịka ụkpụrụ ndị akọwapụtara. Anyị ejirila Huawei P40 Pro mee ule ahụ na iPhone X, na-ejikọ Otto Q na chaja 30W, na-enweta nsonaazụ akọwapụtara. Chaja Moshi a dakọtara na ekwentị abụọ na ekweisi TWS na ụdị nke Huawei FreeBuds 3, nke anyị nyochara ọrụ ya izu oke. Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.»/]
Maka akụkụ ya, ọ nwere nchọpụta nke ihe ndị si mba ọzọ nwere ike igbochi ịchaji ngwaọrụ ma kwado nchekwa. Dị ka anyị kwuru, ekele maka usoro patented ya Weghachi C anyị nwere ike kachasị nke 10W na-enweghị ikpo oke ọkụ, nke a na-enyekwara anyị aka ịkwụnye ngwaọrụ anyị n'enweghị iwepu ikpe ahụ, a ga-agwụ ụgwọ ahụ ọbụlagodi aka uwe ruo 5mm oké, anyị ahụbeghị nsogbu na ndị ọrụ Apple na Huawei. Heatink ya gụnyere ya na-eme ka 10W na-akwụ ụgwọ ike ya, nke a bụ uru ya ma a bịa n'ịghọ chaja ngwa ngwa.
Zụta Moshi Otto Q na Macníficos (njikọ)
Moshi Vortex 2 - ụda ikwesị ntụkwasị obi dị elu
O siri ike ikwu okwu banyere ekweisi awụnyere na ụbọchị a, nyocha ọhụụ kachasị ọhụrụ anyị megoro na-elekwasị anya na atụmatụ ikuku nke ụdị ọ bụla. Laghachi na tebụl nyocha anyị nwere eriri ekwekọ ekwekọ 3,5mm iji hụ ma nwa ebu n'afọ nke ụfọdụ ndị ọrụ maka ụda dị elu karịa eriri analog ziri ezi. Igweisi ekweisi ndị a na-apụta 'adịchaghị mma' site na igbe ahụ.
E ji ígwè mee ha kpamkpam, dịka Moshi si kwuo, ha na-eme ya iji zere mkpọtụ dịka o kwere mee wee si otú a na-enye ụda ikwesị ntụkwasị obi dị elu na-enweghị adịghị ọcha. Ya mere, n'ule anyị, anyị ahụla ezigbo bass, na tiori na ekele maka ndị ọkwọ ụgbọ elu neodymium dị elu (10Hz-20kHz / -10dB @ 1kHz). A na-ahụkwa ihe ndị dị elu karị, eziokwu dị na ya bụ na a na-anụ ha nke ọma na ọkwa ọ bụla anyị nwere ike ịnwale.
Mgbu: 16 ohm
Mmetụta: 103 db
XR8 Ndị Ọkwọ ụgbọala Neodymium
Gụnyere: 3 set nke silicone ntị pad, 1 set nke ebe nchekwa ụfụfụ ntị mpe mpe akwa
Zụta Otto Q na MACNIFICOS
Isi na-ekpebi bụkwa ikewapụ. Anyị na-elekwasị anya na silicone "pad", ha nwere dịtụ stiffer silicone akụkụ, Dị ka ọ na-eme dịka ọmụmaatụ na AirPods Pro, nke ezubere iji tinye ya n'ụzọ dị mfe karị na ntị ma si otú a mepụta ụdị mmetụta efu nke ga-ekewapụ anyị n'èzí. Nsonaazụ a magburu onwe ya, ịbụ earbuds anyị na-ahụ mkpuchi ihe mpụga siri ike ịchọta na ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya. Anyị nwekwara mpempe akwụkwọ ụfụfụ ebe nchekwa nke m nwere ike ikwu maka ihe atụ maka egwuregwu. Kedu ụdị mpempe akwụkwọ ị na-eji, n'ule anyị, anyị achọpụtala na ha anaghị ada mgbe niile.
N'ikpeazụ anyị nwere akara njikwa nke ga-eme ka anyị nwee ike ịmekọrịta ihe na ọdịnaya ọtụtụ yana azịza ma zaa oku maka ekele maka igwe okwu ya. Isi ihe iji gosipụta na ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a bụ ogo nke igwe okwu, na vidiyo anyị ị nwere ike ịhụ etu o si ada ụda n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya, yabụ ịza oku agaghị abụ nsogbu, maka enweghị amaghị etu o si eme ebe a na-eme mkpọtụ.
Otu aka: Kwụsị / Gwuo
Mmetụta abụọ: Abụ na-esote
Long pịa: Kpọọ Siri / Google nnyemaaka
Banyere Mosto's Otto Q, anyị na-ahụ chaja ikuku ọkọlọtọ nke nwere arụmọrụ dị egwu. Onwe m, abụ m otu n'ime ndị na-anaghị akwado ịgakwuru ndị nrụpụta amaghị ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka chaja ikuku, ebe ọ bụ na anyị nwere ike imerụ batrị ahụ na enweghị ezigbo nchebe. Otto Q na-ekwe nkwa ma mezuo njirimara ya, na ọnụahịa nke kwere nghọta n'ahịa maka chaja dị elu, na-enweghị mgbagha ngwaahịa ị nwere ike ịzụta site na euro 45 na Amazon (Njikọ).
Banyere ekweisi Vortex 2, anyị nwere sistemụ wiwi nke na - egbochi gị n'ọtụtụ akụkụ, mana nke edobere dị ka ihe dị oke mkpa ma na - atọ ụtọ maka ndị na - achọ ụda dị elu ma chọọ ịnọrọ na 3,5mm Jack. Nwere ike ịzụta ha site na euro 65 na weebụsaịtị ha
Ogo na ike
Ndakọrịta na obi jụrụ
Nwere ike ịgụnye ihe ntanetị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Moshi Otto Q + Vortex 2: chaja ikuku na-agba ọsọ
Aorus 5, laptọọpụ ịgba ọsọ larịị nke Gigabyte [Nyocha]